ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: သင်..လမ်းလျှောက်နေပါ. ရပ်မပစ်လိုက်ပါနှင့်
ကျယ်ဝန်းလှတယ် ဥယျာဉ်ခြံမြေကြီးတစ်ခုမှာ သက်တမ်းရင့် သစ်သီးပင်ကြီးတစ်ခုကို ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေက ဖုံးလွှမ်း နေပါသတဲ့။ ဒီအပင်ကြီးဟာ သက်တမ်းကလည်းရင့်နေပြီ အရင်ထဲကလည်း သီးထွက်ကျဲခဲ့တာမို့ ခြံထဲက အလုပ်သမား တွေကလည်း ပေါင်းသင်တာတို့ ရှင်းလင်းတာတို့ မလုပ်ပေးဖူးပေါ့။ အဲဒီလိုနဲ့ ခြုံနွယ်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ကြားထဲက အဖူးလေးတစ်ခု ထွက်လာသတဲ့။
ဒီတော့ ခြံအလုပ်သမားတွေက ပြောကြတာပေါ့။
”ဟာ အပင်အိုကြီးတော့ အဖူးဖူးနေပြီဟေ့။ ဒါပေမယ့် အသီးတော့ တင်လိမ့်မယ် မထင်ပါဘူးကွာလို့” ။ ခြံအလုပ်သမားတွေပြောကြတဲ့ စကားကို စပြီးဖူးကာစ အဖူးလေးက ကြားတော့ စိတ်မကောင်းလဲဖြစ် ၀မ်းလည်း ၀မ်းနည်းတာပေါ့။ သူတို့က ငါ့ကိုပြောနေကြပါလား ငါဟာ ချိုမြတဲ့ သစ်သီးတစ်လုံး ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင် တော့ဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် စပြီးဖူးကာစ အဖူးလေးက သူ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကိုတော့ အပျက်မခံဘူးတဲ့ ငါဟာ ဟောဒီလို အဖူးလေးကနေ အသီးသီးနိုင်မယ့် အပွင့်လေးဖြစ်လာစေရမယ်လို့ သူ့ကိုယ်သူ သံဓိဌာန်ချလိုက်သတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်တန်လာတော့ ဖူးကာစအဖူးလေးကနေ ပန်းပွင့်ဖို့ အချိန်ရောက်လာသတဲ့။ ဒီတစ်ညကို ကျော် လွန်ပြီး မနက်ရောက်ပြီဆိုရင် အဖူးလေးကနေ ငွားငွားစွင့်စွင့် အပွင့်လေး ဖြစ်လာတော့မှာပေါ့။ အဖူးလေးဟာ ပျော်လို့ပေါ့။ တက်ကြွနေလိုက်တာ။ ဟော အချိန်တန်ပြီလဲ ဆိုရော သူ့ရဲ့ ပွင့်ချပ်တွေကို ဖြန့်ကားပြီး လှလှပပကြီး ဖူးပွင့်လိုက်သတဲ့။ ပြီးတော့ စိတ်ထဲကလဲ တွေးနေတာပေါ့။ ဟွန်း မနက်ကျရင် ခြံထဲကလူတွေက သူ့အနားလာပြီ ဟယ် လှလိုက်တဲ့ ပန်းပွင့်ကြီး ဒီပုံအတိုင်းဆို အသီးတစ်လုံးလဲ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုတဲ့ ချီးကျူးတဲ့ အသံတွေကို ကြားရတော့မယ် ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်နေမိတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် တစ်ကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ သူထင်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ မနက်မိုးလင်းလို့ ခြံထဲက လူတွေ ရောက်လာကြတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ပွင့်ဖတ်ကလေးတွေရဲ့ အနားတွေဟာ စုတ်ပြတ်သတ်လို့နေတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ နွမ်းနွမ်းဖတ်ဖတ်နဲ့ ခဏနေကြွေကျသွားတော့မှာလို့တောင် ထင်ကြေးတွေပေးကြတယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပန်းပွင့်ကလေးဖြစ်ပြီး ခဏအကြာမှာပဲ လေကြမ်းကြီးတစ်ခု ဝှေ့ပြီးတိုက်သွားလိုက်တာ ပန်းပွင့်လေးခင်ဗျာ ကြွေကျမသွား ရအောင် တစ်ညလုံး အားကုန်ထုတ်ပြီ ကြိုးစားခဲ့ရလို့ပဲ။
ပန်းပွင့်လေးဟာ အရမ်းကိုကြေကွဲသွားတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ငါ ဟာ အရမ်းကို ကံဆိုးလွန်းပါလား။ ငါ ကြိုးစားခဲ့ ရဲ့သားနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ငါဟာ ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ ဟောစပြီး အဖူးလေးဖြစ်တော့လည်း အပင်အိုကြီးမှာ ဖြစ်ရ။ ဒီကနေ ပန်းပွင့်လေးဖြစ်အာင် ကြိုးစားတော့လဲ မထင်မှတ်ပဲ လေကြမ်းကြီးတိုက်ခတ်ခံရတယ်။ ငွားငွားစွင့်စွင့် ပန်းလှလှလေးတောင် မဖြစ်ရတဲ့ဘ၀။ သူ့ဘ၀ကို သူ အရမ်းကိုကြေကွဲပြီး အားငယ်စွာနဲ့ ငိုကြွေးနေခဲ့ တယ်တဲ့။
ခြံအလုပ်သမားတွေကလည်း ဒီပန်းလေးဘယ်တော့ ကြွေမလဲ စောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့။ စထဲက အသီးတင်ဖို့ မရှိတဲ့ဟာ ခုလေကြမ်းကြီးပါ တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ အပင်ကြီး အမြစ်ကနေတုံးကနဲ လှဲပြီး မသေ တာကံကောင်းတယ်လို့လဲ သူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြသတဲ့။ သူတို့ပြောနေတဲ့ အသံတွေကို ပန်းပွင့်လေးက ကြားလေ ပိုပြီး ၀မ်းနည်းကြေကွဲလေ။ ပိုပြီးနွမ်းလျလာလေပေါ့။
ဒီအချိန်မှာပဲ ပန်းပွင့်လေးရဲ့ သစ်ပင်အိုကြီးက ဘာလို့များ သည်းထန်စွာ ငိုကြွေးနေရတာလဲ ပန်းပွင့်လေး ရယ်လို့ မေးလိုက်သတဲ့။ ဒီတော့ ပန်းပွင့်လေးက ပင်အိုကြီးကို ပြောပြတာပေါ့။ သူဟာစပြီး ဖူးပွင့်စကထဲက ခုချိန်ထိ သူ့ဘ၀မှာ သူဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားခဲ့ ပါစေ နောက်ဆုံးတော့ သူဟာနွမ်းကြွေပြီး မြေခရတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ချိုမြတဲ့ အသီးတစ်လုံး ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တော့လို့ ငိုကြွေးနေရတာပါလို့ ပြန်ဖြေသတဲ့။
ဒီတော့ ပင်အိုကြီးက ပန်းပွင့်လေးကို ပြုံးကြည့်ပြီး ဟက်ကနဲ ရယ်သတဲ့။ ဒီတော့ ပန်းပွင့်လေးက အို ပင်အိုကြီးရယ် အေးပေါ့ ရှင်ကိုယ်တိုင်မှ ဒီလိုမခံစားဘူးတာ ရှင်ကတော့ ရယ်နိုင်မှာပေါ့လို့ မျက်ရည်တွေကြားကနေ ရန်တွေ့သလို ပြန်ပြောသတဲ့။ ဒီတော့မှ ပင်အိုကြီးက ခပ်တည်တည်နေလိုက်ပြီး ဒါဆိုမင်းကို ငါမေးမယ်
“ပန်းပွင့်လေး .မင်း လေကြမ်းကြီးတိုက်တဲ့ ညက ကြွေ ကြ ပြီ မြေခသွားခဲ့သလားတဲ့။ “
“အို ..မကြွေသေးလို့ ခုချိန်ထိ ပင်ယံမှာ နေနိုင်တာပေါ့ရှင်လို့ ” ပြန်ဖြေသတဲ့။
ဒါနဲ့ ပင်အိုကြီးက ….
“ဒါပဲပေါ့ ပန်းပွင့်လေးရယ် မင်းဟာ လေကြမ်းကြီး တိုက်ခတ်နေတုန်းမှာတောင် ပင်ယံကနေ မကြွေပဲ ခက်ခက်ခဲခဲ ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပြီမှပဲ ခုလို လေငြိမ်သွားတော့မှ မင်းကြွေ ကြသွားမယ်ဆိုရင် မင်း အဲဒီညက ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ ရလဒ်တွေဟာ အလကားဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့”
လို့ ပြန်ပြောသတဲ့။ ပင်အိုကြီးရဲ့ စကားကိုကြားလိုက်ရတယ် ဆိုရင်ပဲ..ပန်းပွင့်လေးက သူဟာ တစ်ကယ်ပဲ ပြန်လည်ရှင်သန်လာနိုင်ပါ့မလားလို့ ပင်အိုကြီးကို ထပ်မေးလိုက်သတဲ့။ ဒီတော့ ပင်အိုကြီးက ပန်းကလေး မင်းမှတ် ထားကွဲ့..
“ဘယ်နေရာမဆို ဘယ်သူမဆို အခက်အခဲဆိုတာ ရှိနေကြတာပဲ။ ရှိတတ်ကြတာကြီးပဲ။ ဒီလိုပဲ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြတာ ကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် မင်းလိုပဲပေါ့ ကျော်ဖြတ်ပြီးသွားရင် မင်းလိုပဲ ပင်ယံပေါ်မှာ ခပ်ယဲ့ယဲ့ ရှင်သန်ပြီး ကျန်နေခဲ့ကြတာပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဆုံး ရှုံး မှုတွေ ပြန်မရနိုင်တော့မယ့်ဟာတွေကို တမ်းတနေမယ့် အစား မင်းဖြတ်သန်းရမယ့် အနာဂတ်ကိုပဲ ပိုပြီး အာရုံစိုက်သင့်တယ်တဲ့။ ဘယ်အချိန်ပဲ ဖြစ်နေနေ ကြိုးစားနေဖို့က ကိုယ့်ရဲ့ တာဝန် ရည်မှန်းချက်ကို မင်းကိုယ်တိုင်လှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကမှ မင်းရဲ့ အိမ်မက်။ မင်းကိုယ်တိုင် ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်လိုက်တဲ့နေ့မှပဲ မင်းဟာ တစ်ကယ်ကို ကျဆုံးသွားတဲ့ သူတစ်ယောက်အစစ်ဖြစ်သွားပြီ“
လို့ ရှည်ရှည်လျားလျား ရှင်းပြလိုက်သတဲ့။ ပင်အိုကြီးရဲ့ စကားကို ကြားရတဲ့ အချိန်ကစပြီး ပန်းကလေးဟာ အငိုရပ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ကောင်းပါပြီ ပင်ယံက မကြွေသေးသရွေ့ သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ချိုမြတဲ့ အသီးလေးတစ်လုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သတဲ့။
နောက်ထပ်ရက် အနည်းငယ် အကြာမှာတော့ ပန်းပွင့်လေးရဲ့ ပွင့်ဖတ်တွေဟာ ကြွေကျပြီး မြေခသွားရှာတယ်တဲ့ ဒီတော့ ခြံထဲက အလုပ်သမားတွေလဲ ပန်းပွင့်လေးတော့ ကြွေရှာပြီ ငါတို့ပြောသားပဲ အသီးမတင်ပါဘူးလို့ ဆိုပြီး ၀ိုင်းဝန်းပြောဆိုနေကြတာပေါ့။ ဒီအချိန်မှာပဲ ခြံအလုပ်သမားတစ်ယောက်က ပန်းပွင့်လေးရဲ့ ကျန်နေတဲ့ နောက်ဆုံးပွင့်ဖတ်ကလေးကို လှမ်းပြီးဖယ်ခွာလိုက်ချိန်မှာတော့ အလုပ်သမားတွေအားလုံး ဟာ ကနဲ ဖြစ်သွားကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီပွင့်ဖတ်ကလေးရဲ့ အောက်မှာ အသီးကင်းလေး တစ်လုံးကို တွေ့လိုက်ကြရလို့ပဲ ပေါ့။
ဒီလိုပါပဲ စာဖတ်သူတို့ဘ၀မှာလဲ အခက်အခဲမျိုးစုံ နားကျည်းမှုတွေ သောကတွေ ပူလောင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိခဲ့ကြဖူးမယ်။ ရှိလဲရှိလာလိုက်အုန်းမယ်။ စာဖတ်သူတို့မှာ အစွမ်းရှိသလောက် တတ်စွမ်းသလောက် ကြိုးစားပြီး ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါ။ လူ့ဘ၀ဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝကြီးကိုက တစ်သက်မတ်တည်း အမြဲရှိမနေ နိုင်ပါဘူး။ နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက် ချောလဲလိုက် ပစ်ကျလိုက် ဒါကိုက လောကကြီး လူ့သဘာဝကြီး။
ဒီတော့ ဘေးက ပြောသူတွေရဲ့ အမြင်ကို စိတ်မှာမထားပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ်ကိုသာ လှပအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ပါ။ အောင်မြင်သွားတာက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး အဓိကက စာဖတ်သူတို့ဟာ လမ်းမှန်မှန် လျှောက်နေနိုင်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ လမ်းကလဲ လျှောက်နေတယ် အချိန်ကလည်းတန်ပြီဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို မလွဲမသေ ရောက်တော့တာပါပဲ။
မှတ်ထားဖို့လေး တစ်ခုက လှမ်းနေတဲ့ ခြေထောက်အစုံကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ရပ်ပစ်လိုက်ဖို့ စိတ်မကူးပါနဲ့။ စိတ်ကူးမိပြီဆိုတာနဲ့ ဒါဟာ စာဖတ်သူတို့ရဲ့ ကျရှုံးခန်းအစလို့သာ မှတ်ပေရော့။
ပုံလေးကိုတော့ google ကနေရှာဖွေပြီး ယူသုံးထားပါတယ်။
ဘလော့လေးကို လာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့် တစ်ကွ ဘလော့ မောင်နှမများ အားလုံး ကျန်မားလို့ ချမ်းသာကြပါစေရှင်။
စံပယ်ချို9November 2013 at 09:00
ဆွေလေးမွန်9November 2013 at 09:52
ဂျက်ရေ ..စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ ဒီလိုပါပဲ လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ :) :)
ဟန်ကြည် 16 November 2013 at 02:40
ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ မေမေကတော့ ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ မှာလိုက်တယ်...တစ်သက်လုံး မှတ်ထားတဲ့...
“ လဲရင်ပြန်ထ ဒါဘ၀ပဲ ”